Gen. Yusuf Axmed Khayr oo sheegay in ciidanka Puntland ay ku sugan yihiin fadhiisimadoodii Galgala. – Radio Daljir
Maajo 20, 2011 12:00 b 0
Bossaso, May 20 – Wasiirka amniga ee Puntland ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee deegaanada Puntland, sida dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalooyinka halbawlaha u ah Puntland, dagaalkii Galgala, iyo arrimo kale oo la xidhiidha dhinaca nabadgalyada.
Gen. Yuusuf Axmed Khayr oo waraysi gaar ah siinayey idaacada Daljir ayaa sheegay in dawlada Puntland ay juhdi tira badan kubixinayso sidii looga gudbi lahaa falalka amni darro, iyo dilalka qorshaysan ee lagu khaarajinayo biri-ma-geydhada Puntland, si gaar ah wasiirku waxaa uu carabka ugu dhuftay dilalka micnadarada ah ee la xidhiidha aanooyinka qabiilka, kuwaasi oo muddooyinkii danbe kusoo batay magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Wasiirku waxaa uu tilmaamay in ay odayaasha dhaqanka kala shaqaynayaan sidii dadka reer Puntland uga gudbi lahaayeen falalka la halmaala aanooyinka qabiilka oo uu sheegay in reer Puntland ay ku noqdeen nabar aan dawo lahayn.
Waxaa uu soo hadal qaaday dagaaladii dhawaan ka dhacay Galgala gaar ahaan weerar gaadmo ahaa halkaasi lagu qaaday fariisin ciidanka daraawiishtu ku lahaa, waxaana uu shaaca ka qaaday in ciidamada Puntland ay weli kusugan yihiin goobahoodii, inkasta oo wasiirku uu ka gaabsaday jawaabta su’aal kusaabsanayd in ciidankii Puntland ee fariisaka Galgala ku lahaa ay dib uga gurteen.
Mar wasiirka la weydiiyey waxa uu ka og yahay warar sheegaya in arrimaha Galgala ay Somaliland wax ka ogtahay ayaa arintaasi ka gaabsaday; “wax faalo ah hada kama bixinayo arintaasi” ayaa yiri, “balse sida aad u maqasheen u haysta” ayaa uu ku daray.
Puntland oo ahaan jirtay dhul nabdoon ayaa waxaa in dhawaale la soo darsay dilal, falal-dambiyeedyo, iyo jaah-wareer siyaasadeed oo khatar galiyanaya nolosha mujtamaca ku nool, welina aan xal waara laga gaarin, walow dedaalo xakamayneed ay ka socdaan.
Madaxda dawlada ayaa ku celceliya in ay gacan bir ah ku qabanayaan amniga, inkasta oo weli ay dhacayaan dilalka iyo falalka naxdin leh.
Khadar C. Ismaaciil
Bossaso: 21 Garsoore oo ka trisanaa maxkamadaha gobollada Puntland oo shaqadii laga eryey.
Baahin: Arbaca, May 18, Weriye Madar ~ Daljir ~ Bossaso. M/weyne Shariif & afhayeen Shariif Xasan oo kulan yeeshay, iskuse af-garan waayey qodobada muranku ka dhashay; Sh. C/risaaq Qaylo, afayeenka wasaarada warfaafinta ayaan waraysanay … Mudaaharaad & is-rasaasayn ka dhacay Badhan; Gudd. gobolka Sanaag ayaan waraysanay … Maxaa sababa dilalka & falal-dambiyeedyada ka dhaca Puntland? Gen. C/nuur, taliyaha ciidanka bilayska ayaan waraysanay … Munaasabado lagu xusay sannadguurada 20-aad ee gooni-isu-taaga Somaliland oo maanta lagu qabtay magaalooyinka Somaliland …